Shiinaha Balaadhiyay Mashiinka Mashiinka Birta Difaacaya Dadka warshad iyo alaab bad qaba | Boegger
Ilaaliyaha Mashiinka Birta oo la Kordhiyay Qaabdhismeedka Deggan
Ilaalinta mashiinka biraha la balaariyey ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah wax soo saarkeena warshadaha iyo nolosha iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda casriga ah. Dhinaca kale, ilaalinta mashiinka ayaa ilaalin kara qalabka mashiinka si fiican u shaqeeya; dhinaca kale, waxay kaloo ilaalin kartaa nabadgelyada shaqaalaha. Oo leh astaamaha qaabdhismeedka xasilloon iyo waarta, ilaaliyayaasha mashiinka birta ee la ballaariyay ayaa aad ugu habboon dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka sida mashiinka wax lagu jaro, mashiinada korontada, mashiinka wax shiida iyo mashiinka xardho ee warshadaha iyo xarumaha wax soo saarka.
Noocyada mashiinka biraha ee la balaadhiyey Awood sare, qaab dhismeed deggan.
Ka-hortagga daxalka. Ilaali badbaadada shaqaalaha.
Ka hor tag soo galitaanka boodhka, qashinka iyo waxyaabaha kale ee fiiqan. Cimri dheer oo cimri dheer leh
Codsiyada ilaalinta mashiinka biraha la ballaariyey
Ilaalinta mashiinka biraha la balaariyey waxaa badanaa loo isticmaalaa dhamaan noocyada qalabka sida qalabka mashiinka CNC, mashiinka wax lagu jaro, qorsheeyaha, mashiinada korontada, mashiinka wax shiida iyo mashiinka xardho ee warshadaha iyo xarumaha wax soo saarka.
Ballaariyey codsiyada ilaalada mashiinka
Hore: Qalabka Chainmail Oo Aad U ilaalineyso Badbaadadaada
Xiga: Gacan-gashiyada Chainmail Gacmahaaga Nabad Gel